Ity dia mety ho ny macOS 11 araka ny hevitra noforonin'ny mpamorona iray | Avy amin'ny mac aho
Ity dia mety ho ny macOS 11 araka ny hevitra noforonin'ny mpamorona iray
Ny kinova macOS ankehitriny dia 10.13.x. ary ho an'ny maro, ny kinova farany dia mampiseho ny fahamatorana. Ny zava-misy dia tsy mahita endrika hafa mihitsy isika eo amin'ireo kinova samihafa izay miaraka amin'ny laharana 10, mihoatra ny fanatsarana tsotra, izay etsy ankilany kosa no singa fototra amin'ny kinova macOS. Angamba ny macOS dia mila fanovana famolavolana izay ahafahan'izy ireo mizatra amin'ny interface ankehitriny kokoa.
Amin'io lafiny io, androany dia fantatsika ny fotokevitra iray noforonin'ny mpamolavola Alvaro Pabesio, izay ahitantsika a macOS 11 mahavariana, miaraka amin'ny fanovana tena lehibe ary miaraka am-peo amin'ny iOS.
Ny zava-baovao farany hitantsika dia a tsipika menio nohavaozina izay nohamoraina farafahakeliny, miaraka amin'ny Ny Center Control dia azo jerena ao amin'ny Ivotoerana Fanaraha-maso iOS. Miaraka aminy isika dia afaka mampihetsika haingana ny Wi-Fi, Bluetooth, Aza manelingelina ary asa maro hafa. Saingy, manana isika widgets mitovy amin'ny an'ny ankehitriny, izay efa manana fitoviana iray amin'ny iOS. Ary farany, ny ny fampandrenesana dia hanana fanatrehana, amin'ny fomba maromaro.
Miorina amin'ny tatitra vao haingana natolotr'i Bloomberg, mety hisy ny fifandraisana misy eo amin'ny fampiharana ny macOS sy ny iOS, ny maha Mac antsika azy izay manohana. Etsy ankilany, ny fiasa Mihatsara ny Handoff hanome operability tsara kokoa.
Ny rindranasan'ny zanatany dia mihodina tanteraka amin'ny birao. Tsy kinova mihena amin'ny fampiharana izy ireo, fa kinova mahery sy marobe. Ny votoatiny dia hitombo ho azy mifanaraka amin'ny efijeryo sy ny vahaolana, ary ny safidy toy ny File, Edit, na View miasa toy ny rindranasa birao hafa.
Singa fototra iray hafa mifandray amin'ny rafitra ny mode mainty. Amin'ity indray mitoraka ity, ny interface rehetra dia havaozina, amin'ny fomban'ny rindranasa iOS amin'ny maody maizimaizina na ny maizina maizin'ilay pejin-tranonkala Twitter.
Ary hanamparana azy, fisehoan-javatra roa vaovao: endri-javatra vaovao ho an'ny amboary ny "fitaovana" mamela ny fanitsiana hatao amin'ny iPhone, iPad, Apple TV, AirPods ary HomePod. Ary farany, manana bebe kokoa isika topi-maso fampiharana, tsy mila manokatra azy ireo, amin'ny fomban'ny topi-maso azontsika amin'ny kinova ankehitriny rehefa misafidy fisie isika ary manery ny bara habaka.
Hevitra fotsiny io, somary mifamatotra amin'ny famolavolana iOS, saingy fototra tsara ho an'ny kinova macOS manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ity dia mety ho ny macOS 11 araka ny hevitra noforonin'ny mpamorona iray
Sparrow Nick dia hoy izy:
Mbola tsy tiako ny rafitry ny fikandranao
Valiny tamin'i Sparrow Nick
Human Fall Flat, tonga ao amin'ny Mac App Store miaraka amin'ny fihenam-bidy
Raketo an-tsoratra ny efijery Mac anao amin'ny Screen Recorder, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra